Degmooyinka Nora iyo Göteborg oo is dhexgalka ka shaqeeya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka Nora iyo Göteborg oo is dhexgalka ka shaqeeya
Uppdaterat fredag 4 mars 2011 kl 18.53
Publicerat fredag 4 mars 2011 kl 18.15
Degmada Nora oo la amaanay iyo Göteborg oo dadka cusub gacan siisa
Tirro koob ay sameysay hey’ada Statistiska centralbyrån ee marka la soo gaabshay SCB ku sheegtay in sanadkii- 2009-ka ay degmadaasi Nura ay degen yihiin soomaali gaareysa 207 ruux.
” Waa mid dhib yaraana ka dhigeysa howlaha degmadda Nora ee la xirriira wax soo saarka ganacsiga, sida meelaha kale ee isku xiran. Taasoo ay dhici karto inaan la arag dhibaato sida meelaha ee dalka uga jirta, tusaale ahaan degmadda Söderhamn oo kale. Halkaasoo ay ka jiraan xaalad ah tartan awoodeed ah iyo xiisado kala duwanaanshaha xagga fikirka ah. Mana laha demadda Norra meel ay si fiican ugu kobcaan fikradaasi gebi ahaantoodba siyaasadda iyo wixii soo raaca. Waana mid ka dhigeysa goob wax tar u leh cimiladda” Sidaana waxaa yiri oo aaminsan Tom Rymenon oo ah madaxa maamulka degmadaasi Nora.
Mar uu ka hadalayey hadaba Tom dadka soo galootiga ah ee ay degmadu qaadato sanadkii ayuu sheegay iney ballan qaadeen sanadkii iney 50 ruux qaataan, hase ahaate ay sanaihii ugu dambeeyey ay suurtagal noqotay oo keliya in la qaato30 qof sanadkii. Taasina ay u muuqato buu yiri tiro aad yar. Dhibaatadda jira ee hadaba taasi keentay ayuu ku sheegay iney tahay guryaha oo kooban. Xitaa haddii ay jeclaan lahaayeen iney qaataan tirro intaas ka badan oo dadka soo galootiga ah.
Dadyowga yimaada ayaa si dhaqso leh koorasyo ay ku bartaan luqada u qaato toddobaadkii dhowr jeer. Degmadana waxaa ay xooga saartay luqada siddii tabarro loogu sameyn lahaa goobaha shaqada, islamarkaasina ay dadka qaxootiga ahi loo geyn lahaa deegano kala duwan.
Ma ahan oo keliya degmadaasi Nora waxa dadyowga ku nooli ay ka shaqeeyaan is dhexgalka iyo sida ay dadka soo galootiga ahi ula jaan qaadi lahaayeen mujtamaca ay la nool yihiin. Marka aan u leexano magaaladda Göteborg iyo dhankaasi galbeedka Sweden ,waxaa jira hey’ad la yiraahdo Eductus oo hoos timaada xafiiska shaqada ee arbetsförmedling-ka, waxey ka shaqeeyaan arrimaha ay kamid yihiin waxbarashada, suuqa shaqada is dhexgalka iwm. Maxamed Cabdicasiis oo ah shaqaale ka tirsan ayaa laanta afka soomaaliga ee raadiyo Sweden u sheegay iney waxyaabaha ay kamid yihiin waxbarashada, suuqa shaqada is dhexgalka iwm ay aad uga caawiyaan dadka soomaaliyeed ee dhawaanahan soo galay.